हुम्लासहितका हिमाली जिल्लामा भारी हिमपात ट्रान्जिटका मालबस्तुमा क्षति हुनसक्ने – Insurance Khabar
हुम्लासहितका हिमाली जिल्लामा भारी हिमपात ट्रान्जिटका मालबस्तुमा क्षति हुनसक्ने
प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७६, बिहीबार ११:२४
काठमाडौं । पश्चिमी क्षेत्रबाट आएको वायुको प्रभावका कारण पश्चिमी नेपालको हुम्ला तथा आसपासका जिल्ला सदरमुकाममा भारी हिमपात भएको छ । हिमपातका कारण सो क्षेत्रका जनजीवन कष्टकर बनेको छ । हुम्लासहित कर्णालीका उच्च हिमाली क्षेत्रमा आज बिहान ६ बजेबाट हिमपात शुरु भएको छ । हिमपातका कारण यातायातको साधन नपुगेको हुम्लामा आज हवाई उठान ठप्प भएको छ । हिमपातले गर्दा जिल्लाको एकमात्रै यातायात सेवा हवाइजहाज उडान बन्द भएको सिमकोट विमानस्थलले जानकारी दिएको छ ।
नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट बिहान ७ बजेदेखि हुम्लामा उडान गर्दै आएको तारा, सीता, समिट एयरलाइयन्सको उडान प्रभावित भएको छ । हवाई यातायात बन्द हुँदा अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर जाने स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन् ।
हिमपातका कारण चिसो अत्याधिक बढेको छ । यहाँको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा जिल्ला सदरमुकामभन्दा बढी चिसो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ । यहाँको तापक्रम माइनस ६ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ । हिमपातका कारण उच्च हिमाली भागमा मालबस्तु ढुवानीको क्रममा ट्रान्जिटमा रहेका सामानमा क्षति हुनसक्ने जनाइएको छ । –रासस
एक्चुअरियल साइन्सको स्नातक तहमा नयाँ भर्ना खुल्यो, कहिलेसम्म दिन पाईन्छ आवेदन ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै
सामुदायिक लघुवित्तको साधारण सभा फागुन ५ गते, बुक क्लोज कहिले ?
कुमारी बैंकको नाफा ५१ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक कस्तो ?